प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०७७, सोमबार १६:४७
प्युठानको ऐरावती गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक पालिकाभित्र टोल बिकास संस्था गठन शुरु गरेको छ । यसै सन्दर्भमा रहेर गाउँपालिका उपाध्यक्ष बुद्धबहादुर बस्नेतसँग हामीले कुरा गरेका छौं । पढ्नुहोस, गाउँपालिका उपाध्यक्ष बस्नेतसँग गरिएको कुराकानी ।
ऐरावती गाउँपालिकाले टोल बिकास संस्था गठन गर्दैछ, के का लागि ?
– यतिबेला प्युठानको सन्दर्भमा टोल बिकास संस्था नयाँ प्रयोगको रूपमा रहेको छ । यद्यपि अन्य जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले टोल बिकास संस्था गठन गरी प्रयोगमा ल्याईसकेका छन । काम काजको हिसाबले यो संस्था सफल र निकै प्रभावकारी रुपमा देखा परेको छ । यहाँ हामीले पनि बिगतका वर्षहरुदेखी यसको आवश्यकता महशुस गरेका थियौं तर, बुझाइमा अनेकता र आवश्यक तयारी नपुगेका कारण यो कार्यक्रम लागू गर्न सकिएको थिएन । यसपालिको नीति कार्यक्रम र बजेटमा समेत आवश्यक व्याख्या गरेर निकै उत्साहका साथ द्रुत गतिमा टोल बिकास संस्था गठनमा लागेका छौं ।
जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा टोल बिकास संस्था गठन भएको पाइएको छैन, ऐरावतीमा गठन गर्नुको उद्देश्य के हो ?
– मैले अघि नै भनिसके प्युठानमा यो पहिलो अभ्यास हो । मुख्य गरी संघीय संरचना लागू भइसकेपछि बिगतका गाबिस अहिलेका वडाका रुपमा सिमित भएका छन तर, भुगोल भने उही पुरानो गाउँ बिकास समिति नै हो । हिजोको दिनमा ४५ जना जनप्रतिनिधि रहेर काम गर्ने ठाउँमा अहिले ५ जना जनप्रतिनिधिले काम गर्नु परेको छ तर भुगोल उही नै हो । यसले गर्दा कहिलेकाही हाम्रा बिकास निर्माणका लक्ष्यहरु पूरा हुन सकेका छैनन् । साथै बस्तिस्तरबाट आउने समस्याहरु कहि कतै अपुरा र अधुरा हुन पुगेका छन । अब यो टोल बिकास संस्थाले पुर्णता पाएपछि हाम्रा सबै भुगोल र बस्ती समेटिने छन र हाम्रा प्रतिनिधि साथिहरुलाई काममा सहजता पनि हुनेछ ।
टोल बिकास समिति गठनका लागि गाउँपालिका एक्लैको कार्यक्रम मात्र हो कि अरु कुनै संघ संस्था पनि छन ?
– मुख्य गरी टोल बिकास संस्था गठन गर्नुपर्छ भन्ने अबधारणा ल्याएको ऐरावती गाउँपालिकाले नै हो तर यसको साथसाथै यस पालिकामा बिगत वर्षदेखी Stroma Foundation कालिका बिकास केन्द्र संस्था जोडिएर काम गरिरहेको हुँदा यस टोल बिकास संस्था गठन गर्ने सन्दर्भमा कालिका बिकास केन्द्र पनि जोडिएको छ ।
टोल बिकास संस्था गठन गर्ने मापदण्ड के हुन ?
– ऐरावती गाउँपालिका भौगोलिक रुपमा एकैनासको छैन तसर्थ टोल बिकास संस्था गठन गर्दा त्यहाँको भुगोल र घरधुरी संख्यालाई आधार मानेर ६० देखि १०० घरधुरी समेटेर टोल बिकास संस्था गठन गर्ने आधार बनाएका छौं तर यसको कार्यसमितिमा ५० प्रतिशत महिला रहने गरी ९ जनाको समिति रहनेछ ।
टोल बिकास संस्था गठन कति गतेदेखि सुरुवात गरियो ?
– हामीले यो संस्था गठन गर्नु पुर्व गत साउन १५ गते सम्पुर्ण जनप्रतिनिधि र कालिका बिकास केन्द्रका प्रतिनिधि तथा ऐरावती गाउँपालिकाका कर्मचारी समेतको उपस्थितिमा एउटा बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्‍यौं र आवश्यक नीति निर्देशन सहित साउन १६ गतेदेखि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी परिचालन गरी टोल बिकास संस्था गठनमा लाग्यौं ।
ऐरावती गाउँपालिकाका ६ वटा वडामा गरी कति टोल बिकास संस्था गठन गरिन्छ रु र यसका आधारहरु के के हुन ?
– टोल बिकास संस्था गठनकालागि केही निश्चित आधारहरु छन ।
(क) पुरानो साबिकको वडा संरचनाको आधार ।
(ख) घरधुरी संरचनाको आधार ।
(ग) प्राथमिक बिद्यालय संचालन रहेको आधार ।
(घ) एउटै बाटो, पधेरो सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिमा रहेको आधार ।
(ङ) एउटै समुहमा आवद्ध रहेको आमा समूह, कृषि समूह, महिला समूह, सहकारी संस्था आदि । यसो गर्दा गाउँपालिका भरीका करीब ६० वटा टोल बिकास संस्था गठन हुनेछन र यो कार्य यहि साउन २५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेतापनि बिबिध कारणवस केही ठाउँमा बाँकी रहेका छन ।
संस्था कस्को उपस्थितिमा गठन गरिएका छन ?
– टोल बिकास संस्था गठनका लागि हामीले सम्बन्धित वडा समितिलाई जिम्मा दिएका छौं । वहाँहरु आफैले कार्यसुची बनाएर कालिका बिकास केन्द्रका सामाजिक परिचालकहरु समेतको सहजीकरणमा गठन प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ ।
गठन पश्चात् समितिबाट के कस्ता कार्य हुन्छन र यसलाई गाउँपालिकाले कसरी परिचालन गर्छ ?
– यसको मुख्य उद्देश्य भनेको समाजमा रहेका हरेक नागरिकलाई आफुहरु राज्यका नागरिक भएपछि आफुले प्राप्त गर्ने अधिकार, आफुले निर्वाह गर्ने भुमिका र दायित्वको बारेमा स्पष्ट पारेर सामाजिक समृद्धिका लागि समुदायलाई व्यापक परिचालन गर्नु रहनेछ । यसले सामाजिक र आर्थिक बिकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने आशा गरेका छौं । साथै, अहिले जताततै असन्तुष्टि र बेथिति जो देखा परेको छ, टोल बिकास संस्थाको माध्यमबाट समाजमा सुशासन कायम राख्न सकिनेमा म विस्वस्त रहेको छु । यसका साथै टोलबासी नागरिकलाई संगठित गराई सामुहिक भावनाको जागृत गराइने छ ।
टोल बिकास संस्थाका सदस्यहरुबिच आपसी सद्भाब, समझदारी र मेलमिलापको भावनाको बिकास गराइनेछ । टोल बिकास संस्थाका सदस्यहरुबीच सामुहिक भावना जस्तै धनि गरिव र ठूलो सानोको भेदभाव हटाएर सामाजिक समानता कायम गरिनेछ । सामाजिक कार्यमा सकारात्मक सोचको बिकास गराइनेछ । निर्णय प्रक्रियामा सबैलाई समान अधिकार र अवसर प्रदान गरिनेछ । टोल बिकास संस्थाका सदस्यहरुमा उद्यमशीलताको बिकास गराई रोजगारी सृजना गराइनेछ । गाउँपालिका एवं अन्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहमा टोलका नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । टोल बिकास संस्थाका सम्पुर्ण सदस्यहरूलाई बिकासको मुल प्रवाहमा संलग्न हुने अवसर प्रदान गरिनेछ । विभिन्न संघ संस्था एवं गैर सरकारी संस्थाहरुलाई प्रवेशद्वारको रुपमा टोल बिकास संस्थालाई स्थापित गरिनेछ । यस संस्थालाई वडा पालिकाको तल्लो इकाइको रुपमा बिकास गरी गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने हरेक कार्यक्रममा जोडिनेछ । यो लगाएत अन्य धेरै कामहरु यस संस्था मार्फत हुने अपेक्षा लिएको छु ।
यस कार्यक्रमकालागि बजेट बिनियोजन गरिएको छ कि छैन ?
– टोल बिकास संस्था गठन र परिचालनकालागि हरेक वडाहरुमा ५ लाख रुपैयाँको दरले बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।